Inta jeer ee aad ka heli kartaa in aad rabto in aad si loogu badalo flash video ah in mp4 video in xaalkaa labada daaqadaha ama Mac. Waxaa laga yaabaa in aad isku dayday kale converters flash video, laakiin tayada video yaabaa in la yareeyo ama laga badiyay. Si loo xaliyo dhibaatada aad dhib la'aan, qodobkan ka dhigi doonaa talo ah oo ku saabsan sida ugu fiican shan flash in converters mp4 video aan khasaaro tayo kasta iyo xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan. Just eego hoos ku qoran.
Wondershare Video Converter Free waa codsi ah in aad ka caawisaa qaabab audio iyo video qaabab in la doonayo in loo sameeyo iyaga la jaan qaada dhammaan qalabka tayo gaar ah.
Wondershare Video Converter ayaa sifooyinka soo socda ku wanaagsan in marka la barbar dhigo converters kale:
Beddelaan videos in qaab kasta oo in qaab kasta oo yaqaan.
Iska yaree / cadaadisaa baaxadda audio ama video ka files.
Shakhsiyeeyo aad videos la shaqayn tafatirka taas oo ah mid aad u xoog badan ah.
Tayada aad video isku mid.
30X xawaaraha si dhakhso ah marka la barbar dhigo in aad aalada deg deg ah.
Conversion dhexeeya caanka ah video maqal iyo qaabab.
Iska yaree, nuqul, Jinka iyo jar.
OS taageerayaan: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7/8/10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Developer: Wondershare Company Limited Software.
Wondershare Company Software waxaa la aasaasay sannaddii 2003. Waa shirkad ku lug leh horumarinta iyo suuq-gaynta ee codsiyada daaqadaha multimedia in loo isticmaalo in labada guryaha ama goobaha ganacsiga.
MPEG Streamclip waa awood video Converter, ciyaaryahanka iyo editor oo loo isticmaali karaa Mac ama daaqadaha. Waxaa ka ciyaari kara kala duwan ee files. Waxay leedahay sifooyinka soo socda:
Fur iyo ciyaaro badan oo qaabab file video.
Kala duwan ee waafaqsan.
Badalo dhejiyo, iska jaro, jaray ama la soo guuriyeen galay files muxed ama demuxed.
Taageerayaan Platform: Mac OS X 10.5 / 10.3, Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Developer: 5 afar gees.
Afar gees 5 waa shirkad oo la asaasay sanadkii 2007 iyadoo ujeedada ah ee hal-abuurka software iyo adeegyada internet raqiis ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku bixiyeen lacag la'aan ah tusaale MPEG Streamclip.
Download link u Mac: http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-mac.html
Tani waa software ah transcoding warbaahinta caalamiga ah in la horumariyo oo la hayo tan iyo sannadkii 2005.
MediaCoder ayaa sifooyinka soo socda:
Beddelaan content warbaahinta u loo maqli karo la ciyaari doono qalabka multimedia kala duwan.
Mideyso iyo kan caadiga ah qaab kaydinta iyo heerka warbaahinta.
Waraaqda track maqal ah ka files video ama cajalladaha.
U dayactir faylasha kharribeen ama video bixi qayb ahaan.
OS taageerayaan: Windows XP, Vista, 7/8
Developer: Broad Sirdoonka Technologies
Teknoolajiyada sirdoonka Broad waa shirkad in loo soo sameeyay iyada oo ujeedadu ah ee samaynta iyo innovating Softwares.
Tani waa flash dabacsan si Converter mp4. Waa lacag la'aan ah, oo waa la jaan qaada aaladaha kale ee multimedia oo caan ah.
Free mp4 muuqaalada video Converter ka mid ah:
Beddel audio ka video iyo beddelo mp4 in mp3.
No spyware ama adware.
OS taageerayaan: Windows 8, 7, Vista, XP SP3
Tani waa shirkad in la aasaasay sannaddii 2006 Waa shirkad si fiican u yaqaan oo u dhisan waxaa inta badan ku lug leh horumarinta tafatirka iyo Softwares diinta.
Tani waa flash video in Converter mp4 kaas oo la heli online ah.
Waxay leedahay sifooyinka soo socda:
La Heli karo oo lacag la'aan ah.
Fur inta badan qaabab file video.
Beddelaan iyo soo bixi videos.
Madal ay taageerayaan: online
URL Converter: http://www.onlinevideoconverter.com/
Haddii aad u baahan tahay adeegyada lagu hormariyo oo fiican marka fulinta flash si ay beddelaad mp4 video aad si fiican u isticmaasho, kuwaas oo 5 flash in converters mp4 maxaa yeelay, iyagu horumarka howl-qabadka, xawaaraha iyo tayada marka loo eego dhammaan converters kale. Iyaga Isticmaal iyo waxa ay noqon doontaa bilowga aad farxad. Ku raaxayso isticmaalaya converters ugu wanaagsan oo ugu fiican.
Xalliyo: ma gali kartaa MP4 in YouTube
> Resource > MP4 > Top 5 Flash in converters MP4 for Windows iyo Mac